အသည်း detoxify ကိုဘယ်လို? - Afrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်း
အသည်း detoxify ကိုဘယ်လို
Lအသည်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ပထမဆုံးစစ်ထုတ်မှုဖြစ်သည်။ အသည်းကိုကောင်းစွာလည်ပတ်ခြင်းမရှိဘဲကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျနော်တို့ကသူ့ကိုအလွန်အကျွံနှင့်သူ့ကိုအများကြီးတောင်းဆိုသောကြောင့်ကျနော်တို့မလွှဲမရှောင်ဖျားနာအဆုံးသတ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အသည်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအစီအစဉ်တွင်၊
အသည်း filtered အဖြစ်အဆိပ်အကြွင်းအကျန်ထုတ်ပယ်
အရေပြားပြီးနောက်, အသည်းကိုယ်ခန္ဓာ၏အကြီးဆုံးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ နညျးလမျးမြားစှာတှငျဤအရေးအပါဆုံးနှင့်ကျန်းမာရေးမှကြွလာသောအခါစိတ်ထဲမှကြွလာသောနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားသောဖြစ်ခြင်းအပြင်, အသည်းလည်းအနည်းဆုံးအား 200 ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကာကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို complxe ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အသည်း, ထိန်းညှိ synthesizing, သိုလှောင်, secreting, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဝတ္ထုများလှည့်နဲ့ခွဲထုတ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍလုပ်ဆောင်။ အထူးသ, ဒီပါဝင်သည်:
အသည်းကျနော်တို့ရဲ့အများအပြားဆရာများအသည်းအကျင့်ကိုကျင့်လျှင်အများဆုံးရောဂါများ (ဆိုလိုသည်မှာ, တကယ်တော့, ဆဲလ်ယိုယွင်းမရှိပုံစံဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်) ကိုယ်ခန္ဓာ၌မဖွံ့ဖြိုးနိုင်မငြင်းကြောင်းကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းမှအလှနျအရေးကွီး ထိရောက်သောကျန်းမာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပြောင်းပြန်မကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ဦးအသည်းအများဆုံးဖွယ်ရှိပိုပြီးလေးနက်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
သိပ်မြင့်မားသောပရိုတိန်းဓာတ်စာ။ ပရိုတိန်းဇီဝြဖစ်ပေါင်နှံအထူးသဖြင့်အသည်းကဒြပ်ပေါင်းများသို့သူတို့ကိုငါအသွင်ပြောင်းဖို့ရှုပ်ထွေးသောပရိုတိန်း metabolize ဖို့ရှိတယ်လို့အသည်းကြောင့်။ ပိုတစျခုအသည်းအလေးပေးဖြစ်ပါတယ်ပရိုတိန်း, ပိုမိုစားသုံး။
ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အတွက်လွန်းမြင့်မားတစ်ဦးကအစားအသောက်များတွင်။ ခန္ဓာကိုယ်ထို့နောက် lipids အဖြစ်အသည်းထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်ထားတဲ့ triglyceride သို့ပိုလျှံရိုးရှင်းသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပြောင်းပေးပါတယ်။ , အသည်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အဆီပိုပိုအသည်းအခက်အခဲက၎င်း၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပြည့်အဝအကွာအဝေးဖျော်ဖြေရှိပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအကြွင်းအကျန်။ ခန္ဓာကိုယ်ကနေသူတို့ရဲ့ဖျက်သိမ်းရေးအဘို့ပြင်ဆင်ခံရဖို့အလို့ငှာ - ငါတို့သည်, လုပ်ငန်းများ၌ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းနှင့်အသည်းအတွက်သန့်စင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း (ဘာပဲရှိမရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါး, အပန်းဖြေ, ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှု,) ယူနီးပါးအပေါငျးတို့သမူးယစ်ဆေးဝါးများ။
အရက်သည်အသည်းတစ်သျှူးများရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အသည်းရောင်ရမ်းခြင်းလည်းမရှိပြီးတာနဲ့ကြောင့်ပိတ်ဆို့မှုကိုအဆီဖြစ်စေတဲ့နှင့်အသည်းရောင်ရမ်းပိုမိုဆိုးရွားလာ, filtered မရနိုင်ပါ။ ကျွန်တော်သိပ်အရက်လောင်လျှင်, ငါတို့သည်အသစ်တဖန်မွေးဖွားဖို့အသည်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုကအလုပ်များတဲ့, နှင့်အဆုံးရလဒ်အသည်းအသည်းခြောက် (သို့မဟုတ်တင်းမာ) ဖြစ်ပါသည်။
အဆိပ်, လေးလံသောဒြပ်စင်များနှင့်ပိုးသတ်ဆေး။ ကျနော်တို့အသက်ရှူအားလုံးကျနော်တို့ကိုစားခြင်းနှင့်အရေပြားမှတဆင့်စုပ်ယူအရာအားလုံးကိုစင်ကြယ်စေခြင်းနှင့်အသည်းအားဖြင့်မွမ်းမံထားသည်။
နှင့်သင်တန်း၏, နာတာရှည်အသည်းရောဂါ C. တူသောအသည်းရောဂါများရှိပါတယ်
ကံကောင်းထောက်မစွာ, အသည်းသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးတစ်ခုအံ့သြဖွယ်စွမ်းရည်ရှိပါတယ် - သင်ကသူ့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးလျှင်။ သူ့ကိုအခွင့်အလမ်း Give အရာနှစ်ခုကိုဆိုလိုသည်:
Vou သင့်ရဲ့အစားအစာထဲမှာအသည်းကအလုပ်များတဲ့အရာပပျောက် (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဖြတ်) ရန်ရှိသည်။ ပိုငျသကျပိုငျသညျကျန်းမာသောအစားအစာရပါလိမ့်မယ်, ဖျားနာပါပဲ။ သငျသညျလေးနက်အသည်းပြဿနာများရှိပါကတစ်ကုန်ကြမ်းဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်ကိုအစားအသောက်များတွင်သင့်ရဲ့အသည်းအသစ်တဖန်မွေးဖွားရန်အခွင့်အလမ်းပေးဖို့လိုအပျနိုငျသညျ။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်နှစ်, သင်သည်သင်၏အသည်းများအတွက် detoxifying ပျိုးပင်ကိုလုပ်သင့်ပါတယ်။ betaine Hydrochloride နှင့်ပန်ကရိယအင်ဇိုင်းတွေသန့်ရှင်းရေးတစ်ဦးကအလင်းလည်းကောင်းတစ်ဦးအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။
သင်မှန်မှန်အသည်းအာဟာရပံ့ပိုးမှုတို့ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ နို့ဆူးပင်, dandelion, အ Picrorhiza kurooa ဆံ့ကြောင်းဖော်မြူလာကိုရှာဖွေ နှင့် artichoke သို့မဟုတ် beet အစိမ်းရောင်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ဆင်းရဲသောသူသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သော, မကြာခဏခွဲစိတ်ဓါး၏အနှစ်သက်ဆုံးဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သော၏ဖယ်ရှားရေးအရှိဆုံးအမရေိစစ်ဆင်ရေးအတွက်လေ့ကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်။
အဆိုပါသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောကျောက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တာဝန်မနားလည်ပါသည်။ အသည်းဟာတရားခံဖြစ်ပါသည် - သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်ခံယူလုပ်ပါ။ အဆိုပါသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောအဆီနှင့် / သို့မဟုတ်စားသုံးဆီများအစာခြေများတွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းရုံသည်းခြေ retention ကိုဇုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များနှင့်ကြက်ဥမှဓာတ်မတည်ရှိပါကသို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာ, အစာအိမ်အချဉ်ဓာတ်အဆင့်ဆင့်, အဆီများ၏ဆိုးမျိုးအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု, ချွတ်ယွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအစာအတွက်လွန်းနည်းနည်းဖိုင်ဘာအနိမ့်လွန်းမြင့်လျှင် အသည်း, etc, ကောင်းစွာ, ထို့နောက်အသည်း (လက်စထရော, တွင်းထွက်ပစ္စည်း, သည်းခြေဆား, ဆိုးဆေးများနှင့်လက်ဆီသင်အရောအနှော) ကထုတ်လုပ်သည်းခြေခိုင်မာစေလေ့ရှိတယ်တဲ့ကိုက်ညီမှုရှိသည်နှင့် "ကျောက်များ" အပြေးအလွှား အဆိုပါသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောမှတဆင့်စီးဆင်းမီ။
အဆိုပါသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သော၏ဖယ်ရှားရေးကြောင့်ပဲရောဂါလက္ခဏာဖယ်ရှားပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်မထားဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ကသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သော၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းအသည်းထဲမှာအများဆုံးကအခြားကျောက်များခံရဦးမည်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျသစ်ကိုနှစ်ယောက်ဖလှယ်မှုပြဿနာတစ်ခုရှိသည်:
အဆိုပါသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်လည်းသည်းခြေအပေါ်စည်းမျဉ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ဒါကသည်းခြေမေတ္တာရပ်ခံမဟုတ်တောင်မှအခါအူထဲမှာအဆက်မပြတ်စီးဆင်းဆိုလိုသည်။ နာတာရှည်အစာခြေပြဿနာများ၏ရလဒ်နှင့်သင်ဖြစ်ကောင်းရေရှည်အာဟာရချို့တဲ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သည် Periodic ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ်ကိုနဲ့ပေါင်းစပ်နေတဲ့ရာသီအလိုက်စဉ်အတွင်းသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ဖို့အများကြီး သာ. ကောင်း၏။
အသည်းနှင့်သည်းခြေ purgation biliary
အသည်းစင်ကြယ်စေခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ဝင်ပြီးဆီဥရှိသမျှကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်အသည်းအားပေးဟောင်းလက်စထရောသိုက်, ကျောက်, အဆိပ်, မူးယစ်ဆေးဝါးအကြွင်းအကျန်များနှင့်အဆိပ်အတောက်စွန့်ပစ်ဆိုလို။ ဖြစ်ကောင်း (အူပင်တစ် purgation နှင့် detoxification အပါအဝင်) အခြားဘာမျှမသင့်ရဲ့အလုံးစုံကျန်းမာရေးအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်: ဒါဟာအသည်းစင်ကြယ်စေရှေ့မှာမအူမကြီးသန့်စင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ အသည်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်အခါကအူမကြီးဖို့ဦးဆောင်သည့်သည်းခြေပြွန်မှတဆင့် discharges ။ အူ (သင်ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်မြောင်း) စုပြုံပြွတ်သိပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, စွန့်ပစ်ပြန်သွေးကြောထဲသို့စီးဆင်းနှင့်ဤသူသည်သင်တို့ကိုအလွန်နေမကောင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်တွေအမြဲတမ်းအူမကြီး detoxification နှင့်အတူစတင်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်း၏, ဒီအလိုအလျောက်ရောဂါပျောက်ကင်းကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး, - ဤခန္ဓာကိုယ်၌ရှိသမျှသည်အခြားသန့်ရှင်းရေးများအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပျော်စေ5ရက်ပေါင်း
နှင့်လူအများစုရွေးချယ်သင့်ရာဘို့တ - ဤထုတ်ပယ်သန့်စင်အသည်းနဲ့သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောဒေါက်တာရစ်ချတ် Schulz နေဖြင့်အကြံပြုသည်။ ထုတ်ပယ်သန့်စင်5ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်း, နံနက်ယံ၌တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်ပြုမိသည်။ နံနက်ယံ၌မြင့်တက်အပေါ်လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာသည်သင်၏အစာခြေစနစ်ရှင်းလင်းရန်ဖို့စင်ကြယ်သောရေ 8 အောင်စပျစ်ရည်သောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နာရီအကြာတွင်တစ်လေးညှင်းပွင့ add တစ်ဦး Blender 8 အောင်စကိုညှစ် Citrus အသီးဖျော်ရည် (အကြွင်းအကျန်တွေနဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ပန်းသီးဖျော်ရည်သို့မဟုတ်စပျစ်သီးဖျော်ရည်လည်းပြုတော်မူမည်), တစ်ဦးသံပုရာ, ကြက်သွန်ဖြူတစ်လေးညှင်းပွင့ (အတွင်းရောထွေး နေ့စဉ်နေ့တိုင်း), 1 ဇွန်းသံလွင်ဆီစားပွဲ (တစ်နေ့လျှင်တစ်ဇွန်း add), နှင့်ဂျင်းတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း (1 လက်မနှင့် ပတ်သက်. ရှည်လျားသော) စင်ကြယ်သောရေ 8 အောင်စပါ။ ကြောင်းဆေးကိုမသောက်နှင့်သင်၏ပါးစပ်သန့်ရှင်းရေးမှလတ်ဆတ်တဲ့အသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်ကိုသောက်လော့။ တဆယ်မိနစ်ခန့်အကြာတွင်အသည်းအဘို့အ detox မှလက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်ယူပါ။ ဒါဟာပုလင်း၏အဆုံးတိုင်အောင်အ2ရက်အတွင်းတစ်ရက်ကြိမ်3ရန်, အသည်း detoxification အဘို့လည်း65 ဆေးဆိုး pipettes ရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဒါဟာ3နေ့ကသန့်ရှင်းရေး၏ဤကာလအတွင်းသာသီးဖျော်ရည်ကိုယူပြီးသာကုန်ကြမ်းအစားအစာနှင့်5ရက်ပေါင်းယူပြီးနှစ်ရက်အစာကျွေးဖို့အလွန်အကျိုးရှိပါတယ်။
(ညစာရှေ့၌သင်တို့သောက်များနှင့်တစ်နာရီသန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်) နံနက်ယံ၌, သလောက်အသီးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်ကိုယူ ကုန်ကျစရိတ်များ သငျသညျချင်တယ်။ အဆိုပါ beet ဖျော်ရည်အထူးသဖြင့်ကောင်းလှ၏။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်နှင့်အတူသစ်သီးဖျော်ရည်ရောထွေးမနေပါနဲ့, သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်သင်သည်သင်၏သီးဖျော်ရည်ကိုမှေးမှိန်နိုင်ပါတယ်။
ညစာအဘို့, သင်ပိုမိုပျော့သီးဖျော်ရည်ကိုယူနိုငျသညျ, သို့မဟုတျကုန်ကြမ်းဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်သုပ်အညှောက်ပေါက်။ အစဉ်အဆက်သုပ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအဘို့ပြင်ဆင်, ယူမထားပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအမွှေးအကြိုင်မှသံလွင်ဆီ, သံပုရာဖျော်ရည်သို့မဟုတ် cider ရှလကာရည်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အနေဖြင့်ဆေးထည့်သင့်ကိုယ်ပိုင်သုပ်လုပ်ပါ။ သင်တစ်နေ့တာအတွင်းမွတ်သိပ်ရရှိလျှင်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုစားသို့မဟုတ်ဖျော်ရည်ကိုယူပြီးအခမဲ့ခံစားရသည်။ ညစာအဘို့, လတ်ဆတ်သောအသီးသို့မဟုတ်သောက်သစ်သီးဖျော်ရည်ကိုစားကြလော့။
အိမ်သာသွားပြီးနောက်, တစ်နေ့တစ်လျှောက်လုံးရောဖျော်ရည်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များလက်ဖက်ရည်မသောက်ရ - သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်။ နေ့စဉ်အကြောင်းကို 128 အောင်စစားသုံးဖို့ကြိုးစားပါ။
ဒါဟာအစတစ်နေ့တာအတွင်းပိုပြီးပိုတက်စီယမ်ခွက်ဟင်းရည်လောင်ရန်အကြံပြုသည်။ ပိုတက်ဆီယမ်ဟင်းရည်အာလူး peels (ပိုတက်စီယမ်ကြွယ်ဝပင်တဦး) နဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းအခွံတွေနဲ့မုန်လာဥနီ, ဆလရီ, (အရွက်အပါအဝင်) မြေတပြင်လုံး beets, လတ်ဆတ်သော parsley, ကြက်သွန်နီအများအပြားအပါအဝင် tipsy ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, add ဖြစ်လျှင်, ခွံကိုပိုမိုအာလူး (မအလယ်ဗဟို) ကိုယူ နှင့် (50 သီးတောင့်ရန်) ကြက်သွန်ဖြူ။
သန့်ရေထဲမှာနေတဲ့မိုးဒယ်အိုးထဲမှာ 40 မိနစ် 60 အဘို့အနိမ့်အပူပေါ်ပြုတ်။ အားလုံး Filter, Chilling နှင့်ဟင်းရည်ကိုသောက်လော့။ ရေခဲသေတ္တာလာမည့်နှစ်ရက်ဖန်ကွန်တိန်နာအတွင်းကျန်ရှိနေသေးသောဟင်းရည်။
အဆိုပါ 1 နေ့အဖြစ်အတူတူပင်
လတ်ဆတ်တဲ့ကုန်တယ် beets တစ်ခွက်ကိုအစာစားခြင်း, 30 ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းသံလွင်ရေနံနှင့်သံပုရာလယ်ယာထည့်ပါ။
အသည်းများအတွက်အသည်းနှင့်ဆိုးဆေးများနေ့စဉ် detox လက်ဖက်ရည်ယူပါ။
သငျသညျထိုသို့ပြုမှလေ့ (နှင့်ဤကိစ္စဖြစ်သင့်) လျှင်သင်အိမ်သာပန်းကန်ထဲမှာသင့်ရဲ့သိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ "ကျောက်ခဲတို့ကို" ရှိပါတယ်လျှင်ရှုပါ။ အသည်းအချို့ဖျော့အစိမ်းရောင်ကျောက်တို့သည်းခြေထုတ်လုပ်သည်။ သငျသညျအနက်ရောင်ကျောက်ခဲတို့ကိုမမြင်ရလျှင်အဖြစ်ဒါပေမယ့်အနီရောင်နဲ့အညိုရောင်ကွညျ့ပါ။ ကျောက်ဆောင်, အသွေး်ဘယ်မှာလည်းစောငျ့ရှောကျ။ သန့်ရှင်းရေးကာလအတွင်းကထိုကဲ့သို့သောကျောက်ခဲတို့ကို 2000 ဖြုန်းဖို့အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုသူ, သင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျန်းမာသန်စွမ်းပါလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့မစင်မှတဆင့်မရေမတွက်နိုင်သော "ကြည်လင်" အဖြူလက်စထရောကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဤ purgation က tincture နှင့်အတူလက်ဖက်ရည်ရှိသည်ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
လက်ဖက်ရည်သည်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်အထောက်အကူပြုသော်လည်းမည်သည့်အဆင်မပြေမှုကိုမဆိုလျော့နည်းစေရုံသာမကပျို့ချင်အားသက်သာစေသည်။ လက်ဖက်ရည်အတွက်အဓိကဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည် dandelion ဖြစ်သည်၊ ယနေ့အထိသိသိသာသာများပြားလှသော lipotropic ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အသည်းမှအဆီဓာတ်များကိုဖယ်ထုတ်ပေးသည်။ Detox လက်ဖက်ရည်တွင်တွေ့ရသောအခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှာဂျင်း၊ clover၊ သစ်ကြံပိုး၊ burdock အမြစ်နှင့်မြင်းမွှေးတို့ပါဝင်သည်။ စကားမစပ် (ထိုကဲ့သို့သော UVA Ursi, parsley အမြစ်နှင့်သမ်သီးကဲ့သို့) အသည်းအဘို့အကောင်းတစ်ဦး detox လက်ဖက်ရည်များတွင်အသုံးပြုအချို့နဲ့အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုလည်းကျောက်ကပ်မှအလွန်အကျိုးရှိသောဖြစ်ကြသည်။ တဦးတည်းတဆယ်မိနစ် Citrus အသီးဖျော်ရည် detox နှင့်သံလွင်ဆီသောက်သုံးပြီးနောက်ဒီလက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်လောင်သင့်ပါတယ်။ သို့သော်သင်နှင့်နေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးကိုလောင်ရပါမည်နိုင်ပါ။ တကယ်တော့, အသည်းအဘို့အ detox လက်ဖက်ရည်ကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းသည်အစဉ်မပြတ်သူမ၏ကျန်းမာရေးပိုကောင်းအောင်ဖို့ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ (ဆန္ဒရှိလျှင်ပျားရည်သို့မဟုတ်အစစ်အမှန်မေပယ်ရည်နှင့်အတူလက်ဖက်ရည်ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ။
ဒါကြောင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြန်ထုတ်ဖို့အသည်းကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက်ဆိုးဆေးအလွန်အရေးပါသည်။ တစ်ဦးကအလယ်တန်းအကျိုးအတွက်ဒီကိုသိသိသာသာအသည်းအားဖြင့်ပယ်ချ LDL လက်စထရောပမာဏကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ Key ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်နို့ဆူးပင်, dandelion, Picrorhiza kurooa (တစ်ခါတစ်ရံ kutkin သို့မဟုတ် "အိန္ဒိယနို့ဆူးပင်" ဟုခေါ်) နှင့် artichoke သို့မဟုတ် beet အရွက်များပါဝင်သည်။ ပိုးမွှားနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အုန်းပင်ကဲ့သို့သောပိုးမွှားနှိမ်နင်းခြင်းအသည်းအတွက် Detox tincture တွင်ထည့်သင့်သည်။ သင်ကြက်သွန်ဖြူနှင့်အတူအသည်းသန့်စင်ပေးသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှကပ်ပါးကောင်များအားလုံးကိုထုတ်ပယ်ပစ်နိုင်သည်။ ပုလင်းရဲ့အဆုံးတိုင်အောင်အ36 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင် (အီ၏ရောဂါနှင့်အဆင့်သင့်ရဲ့အဆင့်ကိုပေါ် မူတည်. ) နှစ် pipettes ယူပါ။
SOURCE မှ: http://membre.megaquebec.net/3dmage/bioenergy/miracledoc-fr/foiesang-13/foiesang-13.htm
€2မှအသစ် 17,95
နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအောက်တိုဘာလ 20, 2020 2:00 pm တွင်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည်
သူတို့ကကိုလံဘတ်စခင်မှာလာ: ရှေး America မှာအာဖရိကရောက်ရှိခြင်း
လူမည်း - Brigitte Winbi မှကဗျာ